Protestantisme sy ny riandrano
Ohatrinona ny lanjan'ny lakolosim-piangonana?
Vidin'ny lisitra: $7.99 Vidiny: $6.99 Vonjeo: $1.00 (13%) Ohatrinona ny lanjan'ny lakolosy? Ny lakolosy 10 hatramin'ny 15 santimetatra amin'ny savaivony dia milanja 30 hatramin'ny 75…
Ara-baiboly ve ny fampakaram-bady?
Tsy maintsy asehony ny “famantarana ny maha-virjiny” (ra eo amin’ny lambam-baravarana ny maraina), saingy tsy misy fepetra takiana amin’izany ho an’ny lehilahy. 4) Tsy misy lanonana mariazy...
Nanontany ianao hoe: Iza no nandroaka ny fiangonana?
Tamin'ny 3 Janoary 1521, ny Papa Léon X dia namoaka ny omby papaly Decet Romanum Pontificem, izay nandroaka an'i Martin Luther tsy ho ao amin'ny Eglizy Katolika. Iza no voaroaka tsy ho Katolika...
Ahoana no nanombohan’ny pasitera Chris ny fanompoany?
Chris Oyakhilome dia nanomboka ny fanompoany kristiana fony izy nianatra tao amin'ny Oniversite Ambrose Ali, Ekpoma ao amin'ny fanjakan'i Edo any Nizeria. Ny asa fanompoany dia niantomboka tamin'ny voalohany tamin'ny Fiombonan'ny Believers Loveworld ary…
Valiny haingana: Inona no lazain’ny Baiboly momba ny fanampiana avy amin’ny hafa?
Milaza ny Baiboly fa ny mpanome amim-pifaliana no tian’Andriamanitra ( 2 Korintiana 9:7 ) ary nampianatra i Jesosy fa tsara kokoa ny manome noho ny mandray ( Asan’ny Apostoly 20:35 ). … Afaka…
Inona no ohatra momba ny fivavahana sivily?
Ny ohatra momba ny finoana ara-pivavahana sivily dia hita taratra amin’ny fanambarana ampiasaina amin’ny fikarohana toy izao manaraka izao: “I Amerika no firenena nofidin’Andriamanitra ankehitriny”. … “Fialan-tsasatra tahaka ny fahefatra…
Fivavahana inona no tsy manome taova?
Matetika ny Vavolombelon’i Jehovah no heverina ho manohitra ny fanomezana noho ny finoany manohitra ny fampidiran-dra. Na izany aza, midika fotsiny izany fa tsy maintsy esorina ny ra rehetra amin'ny…
Inona no maha-zava-dehibe ny Baiboly eo amin’ny fiainako?
Ny Soratra Masina dia manome antsika vahaolana amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana. Na dia mampianatra antsika ho tia na dia ny fahavalontsika aza ny Tenin’Andriamanitra, dia mampitandrina antsika koa izany fa…
Valiny haingana: Ahoana no mahatonga ny fivavahana miteraka fifandirana ara-tsosialy?
Matetika ireo mahery fihetsika ara-pivavahana no milazalaza ny fihetsik'izy ireo ho famonjena izao tontolo izao amin'ny antokon'olona ratsy fanahy. … Ny olona mampiasa fivavahana hamoronana fifandirana dia mampitombo fotsiny izany finoana izany amin'ny azy manokana…
Valiny haingana: Ahoana no nandraisan'ny humanista anjara tamin'ny fanalefahana ny Eglizy Katolika?
Ahoana no nandraisan’ireo mpandinika ny maha-olombelona Renaissance nalemy ny Eglizy Katolika Romana? Nino ny fisainana malalaka izy ireo ary nametra-panontaniana momba ny finoana maro ekena. … Ny fivarotana sy ny fividianana…
1 2 ... 1,900 Manaraka
Momba ny mpanoratra.
Salama, Colleen no anarako. Ao amin'ny bilaogiko, miresaka momba ny fitarihan'ny Kristianisma tahaka ny Protestanta sy ny fitambaran'ireo fiangonana mahaleo tena mandrafitra azy aho.
Aiza no voasoratra ao amin’ny Baiboly fa Zanak’Andriamanitra i Jesosy?
Inona no anarana tokony hataontsika batisa?
Fanontaniana: Inona no tian’i Levy holazaina ao amin’ny Baiboly?
Inona no anjara asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny fiainan’ny fiangonana sy ny asa nanirahana azy?
Valiny tsara indrindra: Avy aiza ny volamena rehetra ao amin'ny Baiboly?
Firy ny dikan-tenin'ny Baiboly KJV?
Mety ho Fiangonan'i Angletera ve ny masera?
© 2022 Trano fivavahana
FITANDREMANA HO AN'NY MPITONDRA AZY! Ny fitaovana rehetra navoaka tao amin'ny tranokala dia natao ho an'ny tanjona fampahafantarana sy fanabeazana! Raha heverinao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fandefasana fitaovana rehetra, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana dia hesorina ny fitaovanao!